Muxuu Uhuru ka yiri baaritaanka kashifay ‘hantida uu qarsaday’ qoyskiisa? | Dayniile.com
Home Warkii Muxuu Uhuru ka yiri baaritaanka kashifay ‘hantida uu qarsaday’ qoyskiisa?
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa Isniintii sheegay in baaritaanka kashifay hogaamiyayaasha caalamka ee lacagaha ku qarsaday dalal dibadda ah “uu sare u qaadi doono daah-furnaanta maaliyadeed,” hase yeeshee wuxuu diiday inuu ka jawaabo eedeymaha ku saabsan in qoyskiisa ay dibadda ku leeyihin 11 shirkadood uu u dhigma malaayiin dollar.
Previous articleFarmaajo oo kulan la qaatay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed
Next article18 askari oo ka tirsan ciidamadii Mareykanka ee Soomaaliya ka soo dagaallamay oo loo kordhiyay darajada ciidannimo, taas oo u ah abaalmarin lagu sharfay.
Dowladda Iran oo kusii dhowaatay inay hesho Nukliyeer
Madaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday Farmaajo oo kula kulmay magaalada Addis-ababa Yoweri Museveni